စိုက်လျော်ထားရတဲ့ သိန်းထောင်ချီတဲ့ ငွေများ ပြန်ရလိုပြန်ရငြား လုပ်မိလုပ်ရာ အကုန် လုပ်မိနေပြီဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင် သိင်္ဂီထွန်း – Update News
စိုက်လျော်ထားရတဲ့ သိန်းထောင်ချီတဲ့ ငွေများ ပြန်ရလိုပြန်ရငြား လုပ်မိလုပ်ရာ အကုန် လုပ်မိနေပြီဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင် သိင်္ဂီထွန်း
စိုက်လျော်ထားရတဲ့ သိန်းထောင်ချီတဲ့ ငွေတွေ ပြန်ရလိုရငြား လုပ်မိလုပ်ရာအကန် လုပ်နေမိပြီဆိုတဲ့ မင်းသမီးကြီး သိင်္ဂီထွန်း..
တစ်ချိန်က သရုပ်ဆောင်လောကမှာ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံလောက ကနေ ပရိသတ်အားပေးမှုတွေ ရရှိခဲ့တာကတော့ သိဂ်ီထွန်းပြဲ ဖစ်ပါတယ်။ သူမ ကတော့ အမေခန်းတွေမှာ ပီပြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့် ယနေ့တိုင် ပရိသတ်အားပေး မှုတွေနဲ့ အောင်မြင်နေတာပါ။
သူမရဲ့ ကြိုးစားမှုတွေကြောင့်လည်း အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ ပိုက်ဆံတွေစုဆောင်းက စီးပွားရေးတွေကိုလည်း လုပ်နေတာပါ။ မကြာသေးခင် ကလည်း သူ့ရဲ့လှုမှုကွန်ရက် ကနေပြီးတော့ အရင်းနှီးဆုံး သူတွေထဲက တစ်ယော က်က ငွေအများအပြားကို လိမ်ပြီး ပြန်မပေးသေးတာကြောင့် စိတ်တွေလည်း ထိခိုက်နေတာပါ။
ခုမှာတော့ အဲ့ပိုက်ဆံလေးပြန်ရအောင် ယတြာလေးတွေ ချေနေတာပါ။ ရေချောင်းထဲ ခုန်ချမလို့မ ဟုတ်ပါနော်. သူများကိုအာမ ခံေ ပးပြီး စိုက် ရော်လိုက်ရတဲ့. ဆုံးရှူံးထားတဲ့ ထောင်ချီမက ငွေကိုပြန်ရလို ရညား.ယတြာချေနေတာ လိုအပ်တာ ကိုယ်တိုင်ဈေး ထဲသွားဝယ်ရနဲ့ ဘဝမှာ ပါရမီနိုးထချိန် လို့သာဖြေရတယ်ပေါ့လေ .messagerကနေ
တရားသဘောနဲ့ နစ်သိမ့်အားပေးကူညီပေးနေတဲ့သူ တစ်ယောက်မကျန် အားလုံးကျေးဇူးပါ. ကိုယ်ကသာ အားလုံးရဲ့မျက်နာထောက်ေ ပမဲ့ ကိုယ့်အပေါ် သောက်ဂရုတောင်မစိုက်နဲ့တော့ ဟုတ်နေပါပြီလေ လူအချင်းချင်းလည့်ပတ်ခြင်းကင်းရှင်း ကြပါစေ လူသားအားလုံးအေး ငြိမ်းချမ်းသာကြပါစေ ဆိုပြီး ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာပါ။